गर्मीमा स्वच्छ पानी र खानेकुरामा सचेत बन्न स्वास्थ्यकर्मीको आग्रह « प्रशासन
काठमाडौँ । गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आई अस्पताल जाने बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ ।
वरपरको वातावरण तथा बदलिँदो जीवनशैलीका कारण घरमा भन्दा बाहिरी खानेकुराको बढ्दो प्रयोगले मानिसलाई निकै आकर्षित गर्ने गरेको छ । पानीपुरी, चटपटे जस्ता खुल्ला स्थानमा बेच्न राखिएका खानेकुरा खाने चलन बालबालिका, युवा र पाका मानिस सबैमा बढ्दो छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन यस्ता खानेकुरा खाएर प्रभावित भएका बिरामी हरेक दिन अस्पताल आउने गरेको बताउछन् ।
टेकु अस्पतालमा झाडापखाला तथा बान्ता हुने, रुघाखोकी लागेर लामो समय निको नभएका बिरामी सङ्ख्याको ह्वात्तै बढेको डा पुनले जानकारी दिए । झाडाबान्ताका कारण मानिसको ज्यान पनि जानसक्ने भएकाले खानेकुरा, पानी खाँदा सफा, सुरक्षित र स्वस्थकर मात्र खान उहाँ सल्लाह दिए ।
त्यस्तै, गर्मीमा फोहर तथा धुलोका कारण शरीर चिलाउने अनि हातखुट्टामा घाउ हुने, सुक्खा रुघाखोकी लागेर परिवारका सदस्यमा एकअर्कालाई सरेर समस्या हुने उनी बताउछन् ।
“अहिले नै गर्मीमा देखिने झाडाबान्ताका बिरामी अस्पताल आउने सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुन थालेको छ”, उनले भने ।
गत वर्ष यही समयमा फ्लुको सङ्क्रमण बढेको भन्दै उनले धुलोधुवाँ, भीडभाडबाट बच्न पनि आग्रह गरे । कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले गर्मी मौसममा झाडाबान्ता लाग्ने कारण दूषित खानपान तथा पानी भएको बताए ।
उनले कान्ति बाल अस्पतालमा झाडापखालाका बिरामीको चाप बढेको जानकारी दिए । बाहिर सडकमा राखिएका खानेकुरा बासी, सडेगलेका तथा झिङ्गा भन्किएका फोहर पानी अनि फोहरी हातबाट बनाइएका खानेकुरा खाँदा झाडापखालाले मानिसलाई सताउने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
डा. पुनका अनुसार खाना राख्ने तथा खाने भाँडा फोहर भएर पनि यो मौसममा रोग लाग्छ । बजारमा काटेर राखिएका फलफूल नधोइ खानु हुँदैन । यसैगरी सागसब्जी तथा सलाद पनि सफा पानीले नपखाली खाएमा झाडाबान्ता र हैजाका सिकार हुने खतरा रहन्छ ।
यो मौसममा झिङ्गा, लामखुट्टे, फट्याङ्ग्र्रा तथा भुसुना बढी सक्रिय हुने, जताततै पानी जम्ने अनि खानेकुरा छिट्टै गल्ने भएकाले खानपान एवम् रहनसहनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
डा. पुन मानिसलाई बजारको वा घरमै पनि स्वस्थ र सफा पानी र खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गर्ने गरेको दुःखेसो गर्छन् । उनका अनुसार त्यसबाहेक अस्पतालमा पहाडी सर्पले डसेका बिरामी पनि दिनहुँ अस्पताल आइरहेका छन् ।